Media sy Fanoratan-gazety · Janoary, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Janoary, 2020
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Janoary, 2020
Mpanora-gazety Thailandey voasazy noho ny lahatsoratra Twitter fifandirana arakasa nataony tamin'ny taona 2017
Azia Atsinanana 31 Janoary 2020
"Avo ny fanivanantena eto Thailandy... Rehefa rarànao ny fahalalaham-pitenenana... rarànao ny fiarahamonina misokatra."
Torolalàna ho anao momba ny fifidianana ho filoham-pirenena 2019 ao Sri Lanka
Azia Atsimo 24 Janoary 2020
Ny 16 Novambra 2019, handatsa-bato hifidy filoha vaovao ireo Sri Lankey. Fantaro bebe kokoa ny mikasika ireo mpilatsaka ho fidiana ary jereo ato ny lisitry ny vaovao tsara ho fantatra.
Mametraka fitarainana ny Istinomer , sampandraharaha Serba iray misahana ny fanamarinana haingana ny zava-mitsy taorian'ny fanafihana informatika mahery vaika.
Fahalalahàna miteny 20 Janoary 2020
Nangataka fanadihadiana iray hamoahana ny mombamomba ireo nibaiko ilay fanafihana sy namatsy vola ny teknolojia nanaovana izany ny Istinomer.
Amerika Latina 14 Janoary 2020
Ogandà : Ny olan'ny vondrom-piarahamonina no ho fototry ny tantara an'onjampeonay
Afrika Mainty 09 Janoary 2020
Taorian'ny fanaovana fikarohana teny an-kianja, nataon'ny tetikasa ogandey iray "Common Community", dia manoratra tantara iray fandefa amin'ny onjampeo, iresahana fotsiny ny toerana misy ny demaokrasia ao Ogandà ilay tarika.
Afrika Mainty 04 Janoary 2020
Nisy kaonferana "webinar" iray nandalinana ny fomba mahatonga ireo vondrompiarahamonina ara-piteny izay tsy manana fitaovana sahaza ho lasa anjorom-bàla amin'ny fidirana maka ireo tohana tokony hananana ny fahaizana mifehy ny haino-vaky-jery ary ny ady atao amin'ny fanelezana vaovao / torohay diso.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Janoary 2020
Eoropa Afovoany & Atsinanana 03 Janoary 2020
Artista iray azo lazaina ho malaza amin'ny hip-hop no nahita ny fihitsohan'ny lazany tampoka rehefa avy namoaka ny hirany sy ny lahatsariny miresaka momba ny fahalalahana maneho hevitra